Faah faahin dheeraad ah oo kasoo baxaysa sarkaal nabad sugida ka tirsan oo la dilay.
on September 02 2013 Waxaa faah faahin dheerad ah laga helaaya qarax miino ah oo habeenkii xalay lagu dilay sarkaal ka tirsan hay�adda nabad sugida qaranka ee dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho.
Sarkaalkaasi qaraxa lagu dilay oo lagu magacaabi jiray Qaasim Xasan Taakow ayaa sida wararka qaar sheegayaan waxaa gaarigiisa lagu soo xiray qarax, waxaana uu qaraxaasi qarxay xilli uu maraayay halka loo yaqaano Maxfalka oo ku taalo degmada Shibis ee magaalada Muqdisho.
Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa waxaa islamarkiiba gaaray ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan kuwa nabad sugida iyo booliska iyo sidoo kale kuwa AMISOM, waxaana ay halkaasi ka sameeyeen baaritaano aad u xoogan, inkastoo aan la ogeyn cida baaritaanadaasi lagu soo qabqabtay.
Qaraxaasi ayaa sida la sheegay saameeyn aad u balaaran ku yeeshay isku socodka gaadiidka iyo ganacsiga ee degmada Shibis, iyadoona saakay degmadaasi ay weli ka socdaan howlgalada ay halkaasi ka bilaabeen ciidamada dowladda Soomaaliya.
Magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya ayaa mudooyinkii dambe kusoo badanaayay qaraxyo iyo dilal qorsheeysan, waxaana ay hay'adda amaanka ee dalka ay u muuqanayaan kuwa aan weli arinkaasi wax ka qaban.